आफ्नो श्रीमानसंग लागेको शंकामा एक महिलाले युवतीेलाई बजारको बीचमै कपाल काटेर यो के गरिन? - dautarimedia.com
आफ्नो श्रीमानसंग लागेको शंकामा एक महिलाले युवतीेलाई बजारको बीचमै कपाल काटेर यो के गरिन?
एजेन्सी । आफ्नो श्रीमानसंग नजिक भएको आशंकामा एक महिलाले छिमेकी युवतीलाई बिचबजारमा बे इज्जत गरेकी छन् । यो घटना भारत गुजरातको सूरतमा भएको हो । घटनाको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
भाइरल भएको यो भिडियो सूरतको पलसाना तहसीलको तातिथैया गाउँको हो। यहाँ एक महिलाले युवतीको कपाल काटिदिन्छिन् । युवतीले आफुलाई बचाउन निकै कोशिष गर्छिन । तर उनलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैनन् । वरपरकाले पनि महिलालाई नै साथ दिन्छन् ।
युवतीलाई बचाउनुको सट्टा, त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुले घटनाको भिडियो बनाएको देखियो । उपस्थितहरुले रमाइलो मानिरहेका थिए । यस घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि कडोदरा प्रहरीले चासो लिएको छ । युवतीलाई भेटेर बयान लिएको छ र घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न ति महिला सहित दुई पुरुषलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
सूरतकी एसपी ग्रामीण उषा राडाका अनुसार ति महिलाले युवतीलाई आफ्नो श्रीमानसंग नजिक भएको शंका गरेकी थिइन् । शंकाकै कारण महिलाले युवतीलाई वजारको बीचमा वे इज्जत गरेकी थिइन् ।
ति महिलाको नाम सेकन्ती हो। गौरी र दुई अन्य महिलाहरुपनि सेकन्तीलाई साथ दिएका थिए । महिला र युवतीकाबीच केही समय अघि पनि सोही विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । विवाद पछि ती युवती मध्य प्रदेश मा उनको घर गएकी थिइन्। केही दिन अघि मात्र उनी फेरी कडोदरा फर्किएकी थिइन् । युवती फर्किएर कडोदरा आएको थाहा पाएपछि सेकन्ती युवतीलाई भेट्न पुगीन् ।
Previous: बेकरी कम्पनीले कर्मचारीलाई हात धुन लगाएकै कारण दिन पर्यो ४४ लाख क्षतीपूर्ति
Next: तेस्रो पटक पनि छोरी जन्मिएपछि नाबालक छोरी छिमेकीलाई दिइन्, त्यसपछि भयो यस्तो घटना